नेपालमै छ अनौठो गाउँ, जहाँ रक्सी छर्दै चट्याङ्गबाट बच्दै आएका छन गाउँले ! भ्रम वा सत्यता? – – Nepali News Portal in Nepali
नेपालमै छ अनौठो गाउँ, जहाँ रक्सी छर्दै चट्याङ्गबाट बच्दै आएका छन गाउँले ! भ्रम वा सत्यता?
वि.सं १३ बैशाख २०७६, शुक्रबार १०:०९
पर्वत, वैशाख १३ । जब आकाशमा कालो बादल मडारिन थाल्छ, अनि मेघगर्जन शुरु हुन्छ, तब यहाँको एक गाउँका बासिन्दा रक्सी छर्दै चट्याङ्गबाट ज्यान जोगाउनका लागि हतारहतार घरभित्र पस्न थाल्छन् ।
स्थानीय जीतबहादुर विकका अनुसार आकाशमा मेघगर्जन शुरु भएपछि घर वरिपरि मदिरा छर्केर भित्र बस्ने चलनसमेत रहेको छ । मदिरा छर्केपछि चट्याङ नपर्ने परम्परागत मान्यताका आधारमा मदिरा छर्कने गरेका छौँ, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मदिरा छर्केको दिन चट्याङ नपरेकाले विश्वास लिने गरेका छौं ।” दलित समुदायको बाहुल्यता रहेको उक्त गाउँमा भूतप्रेत र दैवीशक्तिको पूजामा मदिरा चढाउने प्रचलन रहेको छ । उक्त मदिरा घर वरिपरि छर्केपछि दैवीप्रकोप हट्ने विश्वासले मदिरा छर्कने गरिएको हो, उहाँले भन्नुभयो ।
तराईमा बढ्दै बर्बर घटना, श्रीमानले श्रीमतिलाई जिउँदै आगो लगाइदिए ।
नलेखिएको डायरीको च्यातिएको पन्नाबाट…… अन्तरआत्माको प्रेम !
सिरहामा सडक दुर्घटना, दुई मृत्यु
वि.सं २४ मंसिर २०७६, मंगलवार ०७:४२